एनआईसी एशियाको नाफा ३ अर्ब ६० करोड - Aathikbazarnews.com एनआईसी एशियाको नाफा ३ अर्ब ६० करोड -
एनआईसी एशिया बंैक लिमिटेडले चालु आ.व. २०७६/७७ को तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरणका अनुसार ३ अर्ब ६० करोड सञ्चालन मुनाफा गरेको छ ।
यसैगरी खुद मुनाफातर्फ वार्षिक विन्दुगत आधारमा १० प्रतिशत ( २६ करोड रुपैयाँ) को वृद्धि सहित २ अर्ब ५० करोड खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको सोही अवधीको खुद मुनाफा २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
विश्वव्यापी महामारीको कारण सृर्जित असहज परिस्थितिको बाबजुद बैंकले चालु आ. व. को तेस्रो त्रैमाससम्म वार्षिक विन्दुगत आधारमा १२ प्रतिशत ( ३८ करोड रुपयाँ) ले वृद्धि गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो ।
यस आ.व.को तेस्रो त्रैमाससम्ममा कर्जातर्फ २५ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरी १७५ अर्ब रुपैयाँ र निक्षेप संकलनतर्फ १५ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरी १९६ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउन बैंक सफल भएको छ ।
बैंकले कुल कर्जा लगानीको हाल ७४ प्रतिशत कर्जा यस्ता क्षेत्रमा गरेको छ । त्यसैगरी प्राथमिकता क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा लगानी पुर्ण रूपले पालना गरेको छ । विविधिकरण कै रणनीति अनुरूप बैंकको उच्चतम दश ग्राहक महानुभावहरूको कुल कर्जा बैंकको कुल कर्जाको ५ रुपैयाँभन्दा कम रहेको छ, जुन बैंकिङ्ग क्षेत्रको उत्कृष्ट मध्ये पर्दछ ।
बैंकको कल निक्षेप हाल कुल निक्षेपको ८ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको छ । यसरी कल निक्षेप घट्दा पनि बैंकको निक्षेप यस अवधिमा १५ अर्बले बढेको बैंकको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले कति समेट्छ बजारको वास्तविक महंगी ?
गरिमा विकास बैंक सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम सम्पन्न